ဂျော့ဘ်များအတွက်စုဆောင်း။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေးဂျင့်များအဘို့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို။ အဘယ်သူကျနော်တို့ဒူဘိုင်းများအတွက်စုဆောင်းပါလိမ့်မည် ?.
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသည်။ ကျိန်းသေ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ ကူညီခြင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းအတွက်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်အကိုင်များ။ ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့စာရင်းပေးနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအလုပ်တစ်ခုတွေ့သောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်နေကြ ဒူဘိုင်းမြို့ရှိအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီနှင့်အတူ။ ကျွမ်းကျင်မှု၏ညာဘက်ရောနှောနှင့်အတူအိန္ဒိယကနေကျွမ်းကျင်သူများဆွဲဆောင်မှုလစာကမ်းလှမ်းမှုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းတွင်ကောင်းသောအမှုကိုစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်။ သငျသညျထိပ်တန်းအလုပ်ရှာဖွေနေစတင်ရန်လိုအပ် ဒူဘိုင်းများအတွက်တွင်ကျယ်စွာ။ လည်း HR မန်နေဂျာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ ကတက် Check ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းသူ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့လာမယ့်နှစ်ကထက်ပိုသောနေရာလွတ်ကိုမျှော်လင့်။ ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဂျော့ဘ်ကနေလတ်ဆတ်တဲ့ ဘလော့ကြော်ငြာ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီလည်း အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်။ အထူးသဖြင့် VAT ၏သစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအပြီး။ ငါတို့သည်ဒူဘိုင်းဧရိယာအတွင်းရှိစုဆောင်းမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ: တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ် ပါကစ္စတန်ကနေကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ငှားရမ်း. ကျနော်တို့က WhatsApp ကိုကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုထုတ်ထောက်ပြရန်။ သငျသညျအလွန်အမင်းအထူးကုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပညာတတ်နေတယ်ဆိုရင်။ ဥပမာအားဖြင့်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ကျွမ်းကျင်မှု။ သငျသညျကျိန်းသေနိုင် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့.
ကျနော်တို့ကိုလည်းအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကကူညီပေးနေကြပါသည် ယူအေအီး။ ငါတို့သည်လည်းရှိပါတယ် Google ကအလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်ကူညီပေးနေ မီဒီယာမွို့တှငျ. ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ကြီးစွာသောဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့လိမ့်မည် တိုးအလုပ်အကိုင်များအတွက်ကမ်းလှမ်း မီဒီယာမြို့ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက 50 သည်အထိ 2018% ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အညီအမျှအရေးကြီးသောအဆိုပါအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်-စကေးစီမံကိန်းများ, အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ပါသည် ဖိလစျအတှကျအသစ်တစ်ခုစုဆောင်းမှုစနစ်အသစ်ကဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး site ကို။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
သူတို့အားဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဆိုဒ်များများထဲတွင်။ အများအပြားအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေစုဆောင်းရှိပါတယ်။ ကြောင်းဝယ်လိုအားရှိလိမ့်မည်ဆိုပါကထိုသူတို့သိကြ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ တစ်ဦး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီ။ နီးပါးအမြဲအထူးကုများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လက်ထောက်ရှာဖွေနေ။ သူတို့ကိုရောက်ရန်သင်သည်သင်၏ CV ကို upload လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထည့်မပြောပါနှင့် ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရှာဖွေစုဆောင်း။ ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု ပို. ပင်ပေးသွားမှာပါ MBA ဘွဲ့နှင့်အတူလောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအဘို့နေရာလွတ်။ ဒူဘိုင်းတွင်မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောအလုပ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူဤအကြောင်းပြချက်လျှောက်ထားသည်။ လျင်မြန်စွာအလုပ်အတွက်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, ပေးထား ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်သူသည်လည်းဆွဲဆောင်မှုလုပ်ခမြျှောလငျ့နိုငျ ?. အကြီးတန်းမန်နေဂျာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာများကူညီနေတာပါ။ ယူအေအီးအတွက်အများဆုံးအောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒီမျိုး။ အခြား အမြင့်ဆုံးပေးချေအလုပ်အကိုင်များအချို့တို့အတွက်သော့ချက်အချက်။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းန်ထမ်းဖြစ်ကြသည်။ အရဒါလွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်အမင်း rated မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အဘယ်သူသည်ကိုသိရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း ဒူဘိုင်းအတွက် 2018 နှင့် 2019 ၌တည်၏။
စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖန်တီးခဲ့သည်။ ကနေနယူးစနစ် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ဦးစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ အဲဒီမှာရှာဖွေစုဆောင်းကျော်စုဆောင်းအထူးကုဖို့နေရာလွတ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကဒူဘိုင်းအတွက်အစိုးရများအတွက်အရေးကြီးသည်။ ယူအေအီးအတွက်ပညတ္တိကျမ်း သူတို့အားဟု အလုပ်ရှာဖွေသူများလုပ်ခစတင် တစ်လျောက်ပတ်သောအဆင့်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ရပါမည်။ ထို့အပြင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းငှားရမ်းနောက်တော်သို့လိုက်ရပါမည် key ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်။
လာမယ့်နှစ်များတွင် 2018-2020 သည်။ ဂျော့ဘ်အတွက် ဒူဘိုင်းအထက်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအ Whatsapp Group မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလိမ့်မည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆီသို့ဦးတည်ရှေ့ဆက်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် ဒူဘိုင်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာ ပိုပြီးခံယူ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးတန်းမန်နေဂျာ။ တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ငှါရှာကြံလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကိုမကြာခဏအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများကသတိမမူအမှတ်ရဖို့။ လူတွေနေချိန်တွင် စိန်ခေါ်မှုများဘို့ပြင်ဆင်နေ။ ပိုပြီးစီးပွားရေးအဘို့န်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပြေး။ ရလဒ်အဖြစ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဝက်ဘ်ဆိုက်များပင်မြင့်မားအွန်လိုင်းအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီဖြစ်သည်။ ဒါဟာ၏အရေးပါမှုကိုညီမျှမယ့်ရှိခြင်း လက်ျာအလုပ်ရှင်ရှာတွေ့.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဆိုပါထိပ်တန်းကစားသမားသည်ယခုအခါနှငျ့သငျလည်းပထမဦးဆုံးမှာကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစျခုဖွစျသညျ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီရှာဖွေနေ နှင့် အိန္ဒိယတွင် Monster ပင်လယ်ကွေ့စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးတာဝန်ခံအခမဲ့ရှိသေး၏။
အဆိုပါစာရင်း ဖြစ်လတံ့သော TOP ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒူဘိုင်းများအတွက်စုဆောင်း:
အလုပ်စက်ဝိုင်း - Rating: 4.67
BAC အရှေ့အလယ်ပိုင်း - Rating: 4.57
ဟေးလ် McGlynn Dubai- Rating: 4.84
Charterhouse မိတ်ဖက် UAE- Rating: 4.25
Clarendon က Parker (အရှေ့အလယ်ပိုင်း) - Rating: 4.00
ACR ကမ္ဘာ့ဖလားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်း Rating: 3.97
ဂျယ်ရီ Varghese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Careers 3.95
iQ ရွေးချယ်ရေး - Rating: 3.90
အလုပ်အမှုဆောင် Solutions ယူအေအီး - Rating: 3.66
SineWave HR အတိုင်ပင်ခံ - Rating: 3.52
အလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ FZE Edge - Rating: 3.44
ပင်လယ်ကွေ့ Connexions - Rating: 3.44
bin မနက်စောစောန်ဆောင်မှုများ - Rating: 3.39
ဒိုမီနို ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအဘို့န်ထမ်းခေါ်ယူမှု & အတိုင်ပင်ခံ - Rating: 3.37
Options ကိုအုပ်စုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (ယူအေအီး) - Rating: 3.33
အရေးပေါ်စုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံ - Rating: 3.20
ဂျော့ဘ်အရှေ့အလယ်ပိုင်း - Rating: 3.15
Nadia အရှေ့အလယ်ပိုင်း - Rating: 3.00
သငျသညျမှနိဒါန်းဒူဘိုင်းမီဒီယာမွို့၌အသစ်တခုအလုပ်အကိုင်များ. ဤအရပ်ဌာန၌, သငျသညျဘဏ္ဍာရေးရာထူးအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ ယူအေအီးအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှ အဲဒီမှာရုံးတွေရှိသည်။ နှင့် A နှင့်အတူရှေ့သို့ရွေ့လျား အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို Smart စီးတီးသို့ဒူဘိုင်းတစ်အသွင်ပြောင်း expats။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ post ကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ အသစ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် ဒူဘိုင်းအလုပ်ပေါ်တယ်s ။ ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းနေကြသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ယူအေအီး၌။ အဆိုပါစော်ဘွားကုန်စည်ပြပွဲများအတွက်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ recruitments။ 55,000 သစ်ကိုဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်စာရင်းကိုင်န်းကျင်အတူတက်ရွှေ့ ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းနေရာလွတ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းသောအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားများကိုဖွင့်ဖို့ဆန္ဒရှိ။ အဆိုပါ GCC ဒေသအတွင်းစီးပွားရေးစင်တာဖြစ်လာ.
ရလဒ်အနေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အသိအမြင်မြှင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဘဏ္ဍာရေးလုပ်ခ၏ခန့်မှန်းချက်ပြုတော်မူပြီ။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, သင်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, သငျသညျအလုံအလောက်အောင်မရလျှင်။ သင် ... သင့်တယ် သစ်တစ်ခုလွတ်ရှာဖွေနေစတင်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတခု၏အပြုသဘောဘက်ခြမ်းတွင်။ သငျသညျအများကြီးပိုလွယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အလုပ်လျှောက်လွှာတွန်း။ ပို. ပင်ငှားရမ်းမန်နေဂျာရောက်ရှိဖို့ရန်။
ရေရှည်မှာမှာတော့ထိပ်တန်း3ဘဏ္ဍာရေးကောင်းစွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း / အားဖြင့်ခန့်မှန်းဘို့ရာထူး paid (Nasdaq ဒူဘိုင်း) လစာ:
ဘဏ္ဍာရေးအတွက်ဒါရိုက်တာ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုမ္ပဏီများမှ (အကြီးစား): $ 144,300 - $ 251,700
အကြီးတန်းအခွန်မန်နေဂျာ (ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ): $ 102,000 - $ 161,000
ရိုးရှင်းသောအကြွေးနဲ့ controller (သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီ): $ 62,200 - $ 78,500
အမှန်တကယ် ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်တွင်ကျယ်စွာများထဲမှ။ မီဒီယာမြို့ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်း။ ထို့အပြင်အမည်ရကောင်းစွာ Bayt အဖြစ်ကိုသိနေသည်။ နှင့်အခြားတဦးတည်း Careerjet.ae ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒူဘိုင်းဘလော့ပေါ်မှာအများကြီးပိုမိုသိရှိလိုပါကလည်းမရှိ။ ဘာအကြောင်းလဲ သငျသညျကောငျးမှလုပ်ခလစာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်မျိုးကို။ ဒါ့အပြင်သငျသညျကိုအောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်စုဆောင်းရန် ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်လျှောက်ထားခင်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံသင့်ရဲ့အကွာအဝေးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ကိုယ်တိုင်လျှော့မတွက်ကြဘူးသေချာပါစေ။ ဒါအတွက် သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက်အကြောင်းပြချက်,သင်ယူအေအီးမှရွှေ့အဘယ်ကြောင့်သိကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။
သင်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ဖို့ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သင်တန်း၏အခွန်လွတ်များမှာ. သို့သော်လူတိုင်းညာသိတယ် ?. သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံတစ်ဦးအမြင်တစ်ရလဒ်အဖြစ်။ ရှာဖှေ ဒူဘိုင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက် က်ဘ်ဆိုက်။ ထိုအခါသင်ကြိုက်နှစ်သက်တရှာပါ။ ၏သင်တန်း, အကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်အကြီးဆုံးသူတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။
ရောဘတ်တစ်ဝက် - ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီ
ရောဘတ်တစ်ဝက်က်ဘ်ဆိုက်တွင်, သင်သည်များစွာသောနေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ အကူအညီနဲ့ရှာဖွေပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလutomotive အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်စာရင်းများ။ ရောဘတ်တစ်ဝက်ကုမ္ပဏီနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှ နှင့်ယူအေအီး။ ကမ္ဘာတဝှမ်းအမှုဆောင်အရာရှိနေရာယူခြင်း။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအခွင့်အလမ်းများအများအပြား။ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများကသွားရောက်ကြည့်ရှုနေသည်နှင့်အတူ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုတည်း အကြီးတန်းမန်နေဂျာများအတွက်သီးသန့်န်ဆောင်မှုများ ရောဘတ်တစ်ဝက်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှု clients များပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအချို့တခြားနေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကအတော်လေးမကြာခဏသူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတိတ်တဆိတ်အွန်လိုင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အခွင့်အာဏာအလုပ်ရှာဖွေရေး site ကိုအမျှ။ ရောဘတ်တစ်ဝက်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလုပ်ရှာဖွေရေးပူဇော်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဘလော့ဂ်ပေါ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကို။ တစ်ဘို့အလို့ငှာ GCC နိုင်ငံများတွင်မြေယာအလုပ်.
ရောဘတ်တစ်ဝက် - ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီ 1948 ကတည်းက။ ကူညီပေးခြင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများ အကြီးအအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများရှာတွေ့။ သူတို့ကိုသင့်ရဲ့အနာဂတျအတှကျညာဘက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေစို့။ သူတို့ကယခုများမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း။
CareerBuilder - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဘသည် Portal ကို
အကျိုးဆက် CareerBuilder မြင့်မားသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါးဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်ပေါ်တယ်။ US မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်၏အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောအထက်တွင် !. ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဒီအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစား။ သင်စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေအထူးသဖြင့်အခါ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးဒီကုမ္ပဏီကို။ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ် မည်သည့်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ပြည်ပရှိများအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာ။ ဤအချက်များအရ CareerBuilder အကြီးမားဆုံးအလုပ်အကိုင်ပျဉ်ပြားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့စီမံနိုင်သည် အလုပ်အကိုင်အသုတေသနတကမ္ဘာလုံး.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီအံ့သြဖွယ်အဖွဲ့အစည်းကစကားပြော။ သငျသညျရာထူး filter မှခွင့်ပြုသော search function များအားစီမံခန့်ခွဲ။ ရွေးချယ်ရေးစံအားဖြင့်ဥပမာ။ သငျသညျပါဝငျနိုငျ ယူအေအီးတည်နေရာ။ သင်ပင်လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရရာထူးများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမဒီဂရီနှင့်အတူ, သင်ဆဲအဘို့ထိုသူတို့သုံးနိုငျ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ။ စောင်းနေသောကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုစောင့်ရှောက်သည်။ ကောင်းသောလုပ်ခရှာရန်အထိနှင့်နိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ထားရှိရလိမ့်မည်။ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောက်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ CV ကိုရရှိနိုင်သည်။ သူမန်နေဂျာများမှ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း.
အမှန်မှာ - No.1 ယောဘကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်မဆိုအလုပ်ရှာနေသကဲ့သို့ရှည်လျား။ အမှန်စင်စစ်သင်တစ်ဦးကူညီပေးနေလက်ကိုငါပေးမည်။ နှင့်အခြားရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းအလုပ်တွင်ကျယ်စွာ။ သငျသညျအမှန်စင်စစ်ရောက်ရှိသည့်အခါအဓိပ္ပာယ်လုပ်မထားဘူး။ သငျသညျ Indeed.com ကိုကြည့်သည့်အခါကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအလျင်အမြန်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလုပ်အကိုင်များရှိခြင်းကြောင့်အသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, ထိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းစွာကုမ္ပဏီကိုသိရ အင်တာနက်ကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်ဘို့ SEO ဆိုသည်မှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ အမေရိကန်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီအသာအခြေစိုက်စခန်း။ သင်ပင်အိုင်ယာလန်တွင်ဤကုမ္ပဏီရုံးခန်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း, သေချာဘို့ပါပဲ။
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်, ဒီကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အလုပ်လျှောက်လွှာစူပါလွယ်ကူပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အပြုသဘောဘက်တွင်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ဤရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကုမ္ပဏီကြီး။ အမှန်စင်စစ်ဟုခေါ်တွင်များစွာသောအခြားအလုပ်ဆိုက်များမှစာရင်းများကျစ်လစ်။ နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အလုပ်တွင်ကျယ်စွာအားမရ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရယူ။ ဒီရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများသည် မှစ. ။ GCC ရှာဖွေစုဆောင်းရာမှတပ်လှန့်လတ်ဆတ်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ထောက်ပြဖို့သင်တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကကျိန်းသေသငျသညျခွင့်ပြု တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဒေသအလိုက်သို့မဟုတ်တကမ္ဘာလုံးကိုရှာ။ ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အဘို့အလည်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ မြို့တော်။
Job.com - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်
Job.com နှင့်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ဖြစ်ပျက်သမျှကို။ သင်လုပ်နိုင်သည်နှင့်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပါ။ ထိုမှတပါး, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရှာ ယင်းစူပါအစာရှောင်လမ်းအတွက်။ အကောင်းဆုံးကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ရိုးရှင်းစွာဒီအလုပ်ပေါ်တယ် အသုံးပြု. ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးဆိုဒ်များ၏အမြင်၌တည်၏။ ဒါကဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလူကြိုက်များက်ဘ်ဆိုက်။ Google ကအလုပ်သတိပေးချက်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ အတူတကွအမှန်တကယ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူ။ သင့်အနေဖြင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဆောက်သင်လိုချင်သောဘယ်အချိန်မဆိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျသှားဖို့ကောင်းတစ်ဦးစီမံကိန်းအတွက်တှေ့ရှိပါကသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သူတို့မရှိတော့ အပိုဆောင်းအလုပ်တင်ခြင်းကိုထောကျပံ့။ ဒါကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖြောင့်ဘို့ မန်နေဂျာများငှားရမ်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက် တံခါးများ။ ထိုအားဖြင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုရှာဖွေရန်စတင် recruiters ။ သူတို့ကိုသင်မေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီက global web portal အတူ။ သင့်အနေဖြင့်ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်အားရှိသည်။
TheLadders: $ 100K သည် Next ကိုယောဘသည်ကမ်းလှမ်းချက် Get - ယခုစုဆောင်း!
ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ကြောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ။ တစ်ခုကြီးမားတာဝန်ဖြစ်လာ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ ထိုအပင်သင်ထင်ထက်ပိုပြီးအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံယူပြီး။
ဒီဆိုက်နှင့်ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အလုပ်လျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ရန်။ အကျိုးဆက်များအတွက်, နေ့စဉ်အလုပ်ရှာဖွေသူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွင့်အပေါ်အလေးပေး အကြီးတန်းအဆင့်ကိုအမှုဆောင်အရာရှိသည်။ လုပ်နိုင်အလွယ်တကူထိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ရည်မှန်းထားသူဖြစ်ခြင်းကိစ္စတွင်ပညာရှင်များကြောင်း အဲဒီမှာ CV ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အဲဒီမှာအလုပ်ရ။ အဆိုပါခေါင်းဆောင်များကုမ္ပဏီလှေကားအဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် အလုပ်ပေါ်တယ် အလုပ်ရှင်များထံအပ်နှံမှာပြည့်စုံသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူ။ နောက်ဆုံးမှာ, 2017 မှီတိုင်အောင်နေဆဲ ပညာရှင်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးနေ, Market ကပြန်အမှတ်ရဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်အဘို့သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းရွှေ့၌သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
LinkedIn တို့ - ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်သည်ကွန်ယက်၏ဘုရင်က
အဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ linkedin ထိပ် networking site များ၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထို့အပြင် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး tool ကို။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ reason.Even ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကဒီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအများကြီးအာရုံစိုက်သည်။ linkedin အလုပ်ပေါ်တယ် သငျသညျနိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ linkedin သူအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း။
သင်ပင်ကွန်ရက်ရန်သင့်တိုးချဲ့ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်အဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ LinkedIn တို့ပိုပြီးအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုရှိပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်အခြားမည်သည့်အလုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်။ သို့မဟုတ်ပင် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသများများအတွက်။ သင်ပင်အကြောင်းသိမတိုင်မီဒီအကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာစတင်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်းကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဒါ့အပြင်ကူညီပေးသည် 500 ကျော်သန်းနဲ့ချီတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး.
သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အတော်များများကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာက်ဘ်ဆိုက်အလားအလာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အားဖြင့် ရှာဖွေနေစတင် အလုပ်နေရာလွတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၌တည်၏။ သငျသညျ LinkedIn အပေါ်အလုံအလောက်လူကြိုက်များ ?. မရလျှင်သင်ခက်ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကြီးတန်းငှားရမ်းမန်နေဂျာ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကနေ။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း။ ဒီတော့နှောင်းပိုင်းကဖြစ်နှင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးအတွက်လူမှုမီဒီယာကိုစတင်သုံးစွဲကြပါဘူး။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက် LinkedIn တို့ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေး
LinkedIn နှင့်အတူအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ, ၏ရလဒ်အဖြစ်။ သငျသညျအသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများ join လို့ရပါတယ်။ ရှာဖွေစုဆောင်းအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်ဘယ်မှာလဲ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သင်လုပ်နိုင်သည် လျင်မြန်စွာအလုပ်လျှောက်လွှာကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ထိုကျော်ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီအထဲမှာမန်နေဂျာငှားရမ်းရန်ပေးပို့ခြင်း။ LinkedIn ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်။ အဆိုပါ ယူအေအီးအလုပ် Finder LinkedIn မှ Facebook အထဲကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာကပိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရသည်လို့ပဲ။ အများကြီးပို ယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း orientated လမ်းညွှန်.
ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုကျော်, သငျသညျတိုက်ရိုက်စကားစမြည်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုရန်တစ်ခုတည်းသောအနှုတ်လက္ခဏာဘက်။ သငျသညျကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေစဉ်အမှား.
ငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေစုဆောင်းအတူ။ သင်သာ Facebook နှင့် LinkedIn အပေါ်သတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့ကြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျိန်းသေဤကဲ့သို့သောဆိုက်များအားရှာဖွေ။ နေ့စဉ်အလုပ်ရှာဖွေသူခွင့်ပြုမည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ။ ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အသိပညာမြှင့်တင်ရန်။ ကုမ္ပဏီများသည်စိတ်ဝင်စားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့အလုပ်ကမ်းလှမ်းတယ် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ။ Linkedin မှသက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကြောင့်တိုးတက်နေသည်။ သင်၏ Linkedin ပရိုဖိုင်းကိုသင်ထည့်ရမည် သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက်အနာဂတ်အတွေ့အကြုံ.
Reed.co.uk - ဒူဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ဗြိတိန်အခြေစိုက်ဂျော့ဘ်
အဆိုပါအလုပ်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက် ကဲ့သို့ Reed.co.uk။ ဗြိတိန်နှင့်ယူအေအီးကုမ္ပဏီများ၏ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စစီမံခန့်ခွဲ။ ဒါကြောင့်သင်ကဟိုတယ်ယူအေအီးအတွက်ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှ အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာတွေ့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရိဒ်မှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်သွင်းခြင်း။ ကျိန်းသေတိုင်းဝန်ထမ်းပြည်ပရှိဖြစ်လာမှကူညီပေးပါမည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမဟုတ်မှသာရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်ကဏ္ဍများအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ။ သို့သော်အထူးသဖြင့်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသူ့ဟာသူမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကျူပင်အလုပ်ရှာဖွေသူများကုမ္ပဏီရဲ့ featured ရွေးချယ်စရာသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးခြင်း။ အလုပ်တွေအများကြီးဒူဘိုင်းအတွက်အဘယ်မှာရှိကမ်းလှမ်းသလဲ? အမှန်တကယ်, သငျသညျအင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့လန်ဒန်ရုံး၎င်းတို့၏မန်နေဂျာတစ်ဦးနှင့်အတူ။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဤအလုပ် site ပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ လစာပေါင်၌ရှိကြ၏လုပ်နေကြသည်။ ထိုအကြိုးခံစားခှငျ့မြားကိုလညျးဗြိတိန်ငွေကြေးပေးဆောင်။ ဒါကြောင့်သင်ကမြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေချင်ပါတယ်လျှင်။ အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် reed.co.uk စဉ်းစားပါ။ ထို့ပြင်အတွက်အလုပ်အကိုင်အစာရင်းများပေးအပ်ဖို့အပြင် ပင်ထိုမိန်းမသည်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်း။ ရိဒ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်များနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းခွင့်ပြု။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေ 500 မိုင်အတွင်းအလုပ်အကိုင်အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဖေါ်ထုတ်ရန်။ ရိဒ်နှင့်အတူသငျသညျစျေးကွက်ကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှ တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှာဖွေသူများမှကုမ္ပဏီများမှ.
Monster - အိန္ဒိယ - ဒူဘိုင်းယောဘ Portal များအတွက်ယူအေအီး
Monster နှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်, အာရှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအဘို့ကောင်းသော။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒေသခံလူမြိုးတစျမြိုးမြားစှာသောမိကျောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမှုများကိုမသုံးပါဘူး။ အဆိုပါ monster.com အဓိကအားဖြင့်အကြီးအကျယ်အလုပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာနေကြသူတောင်အာဖရိကများအတွက်။ ထို့ပြင်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်သည်အသုံးပြုသူများကိုလည်းအားသာချက်ယူပြီး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီယေဘုယျအားအမှုဆောင်အရာရှိလွှဲပြောင်းဘို့ဖန်ဆင်းစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်စာရင်းများ၏အကြီးဆုံးဂဏန်းတွေထဲကရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရယူခြင်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် Monster နှင့်အတူ.
50,000 အလုပ်အကိုင်များကျော်နေ့တိုင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ သာ. ကောင်း၏သင်တို့ကိုလည်းခွင့်ပြု Monster ကိုရှာပါ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်ပေးရန်။ အဖြစ်ကောင်းစွာယူအေအီးအတွက်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကိုအဖြစ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ superbly ဒူဘိုင်းအတွက်အိုင်တီကုမ္ပဏီများအတွက် rated ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်တီအလုပ်ရှာဖွေသူများရုံဝန်ဆောင်မှုကိုချစ်။ the Monster အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျရှာဖှေသတိပေးချက်န်ဆောင်မှုများဖန်တီးနိုင် သငျသညျယူအေအီးမှရွှေ့မတိုင်မီ။ တဖန်သင်တို့သင့်အီးမေးလ်ပေးပို့အလုပ်သတိပေးချက်များကိုပစ်မှတ်ထားလာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်၎င်း၏ကုမ္ပဏီများ 80% Monster.com အပေါ်အလုပ် post ကိုစီမံခန့်ခွဲ။
ကျိန်းသေဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်းအိန္ဒိယတွင် Monster ။
SimplyHired - ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်း-rate ကိုယောဘရှာဖွေရေးအင်ဂျင်
ထို့အပွငျရိုးရှင်းစွာအအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်ငှါး၏။ ဒါဟာအမေရိကန်နှင့်ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏တဦးတည်းအကြားဖြစ်ပါသည်။ သင်ပင်သူတို့နှင့်အတူတစ်ဘလော့ဂ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အားလုံးရိုးသားမှုခုနှစ်, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအီးမေးလ်သတိပေးချက်ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်း။ ထိုအခါတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အလုပ်အကိုင်အမုဆိုး နေ့စဉ်အလုပ်ရှာဖွေမှုများကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်စိတ်ထဲအတွက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, MBA ဘွဲ့ရအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကဤစာမျက်နှာကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သင့်ပါတယ်။ တောင်မှအတွေ့အကြုံရှိ အလုပ်ရှာဖွေသူများယခုတွင်လည်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတှေ့နိုငျ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများအပြားကုမ္ပဏီများသည်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရှာထွက် sort ။ သူများတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်း။ SimplyHired မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုငှားရမ်း။ သူတို့ဟာနေဆဲအွန်လိုင်းစုဆောင်း။ ရိုးရှင်းစွာအအငှားလည်းမတူကွဲပြားမှုများမြင့်မားမှုနှုန်းများ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အမုဆိုးများအတွက်.
So သငျသညျသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေလျှင်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုကမ်ဘာပျေါတှငျဧရာရွေးချယ်စရာယနေ့ရှိနေပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျစာမကျြနှာမြား၏လူအပေါင်းတို့အားသင်၏ CV ကိုပို့ခြင်းငှါမတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲသင်ချင်ပါတယ်လျှင်လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးတိုးချဲ့ဖို့။ အရှုံးမပေးနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ဘယ်တော့မှမ။ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့နှင့်အစာရှောင်ရွှေ့။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအတူကံကောင်းပါစေ။ ဒါ့အပြင်ပင်လယ်ကွေ့မှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြည့်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တတ်နိုင် ဆော့ဒ်အာရေဗျများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေစတင်ရန်.